﻿ ‘साई मेडिकलले स्तरीय र सुलभ सेवा दिइरहेको छ, अब रामधुनीमा अस्पताल खोल्ने तयारीमा छौं’
कोरोना महामारीको प्रकोप फैलिइरहेको छ । सबैभन्दा अग्रपंक्तीमा रहेका छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरु । जोखिममा रहेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका स्वास्थ्य संस्थामध्ये रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित साई मेडिकल पनि एउटा हो । ११ जना कर्मचारीसहित १८ जनाको यो मेडिकलका सञ्चालक दुर्गा फुयालसँग रामधुनीको स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै समग्र कोरोना महामारीलगायतका विषयमा न्युजलयका लागि ज्योति पोख्रेलले गरेको कुराकानीः
आजभोलि केमा व्यस्त हुनुन्छ ?
हाल लकडाउनको अवस्था छ । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को विरुद्धमा सबैलाई जुटौं भनेर सामाजिक अभियानमा लागेको छु । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक भएको हिसाबले हामीसँग भएका सेवा दिई रहेका छौं ।
कोभिड–१९ को चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कसरी मेडिकल सञ्चालन गर्नु भएको छ ?
पहिलो कुरा त अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारीकोविरुद्ध हामी आफैं सजग छौं । अर्को कुरा के छ भने हामीले सबैलाई माक्स लगाउने, सकेसम्म साबुन पानीको प्रयोग गर्ने, हैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, प्रत्येक अस्पताल तथा मेडिकल अगाडी साबुनपानी राख्ने, साबुनपानीले हात धोए पछि मात्रै भित्र जान दिने, माक्सको प्रयोग गर्ने, उहाँहरुलाई फेसिज लाउनु भन्ने खालको तयारी गरेका छौं । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई कहिलै स्थगित गरेनौं । २४ सै घण्टा सेवा दिइरहेका छौं ।
सुरुवाती दिनदेखि हाल सम्म के कस्ता चुनौतीहरु देखा परेका छन् ?
२०५९ साल कात्र्तिक महिनादेखि यो मेडिकल सञ्चालनमा आएको हो । हाल १८ वर्षको अवधी पुरा भएर १९ वर्षको दौडानमा छ । यो ग्रामिण क्षेत्र हो । यहाँ अझै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि शिक्षाको कमि रहेको छ । डाक्टरी सेवा भनेको के हो, त्यो बारे बुझेका छैनन् । चुनौती धेरै छ तर चुनौतीलाई सामना गर्न खासै समस्या छैन । यस बीचमा चुनौती धेरै आउने गरेका छन् । तर म यो रामधुनी नगरपालिकामा एउटा हस्पिटल सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु । ५ देखि ६ महिना भित्रमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सहरी विकासमा नक्सा पास गरिसकेको छु ।
यस मेडिकलमा कुन रोगको बिरामी बढी आउने गरेका छन् ?
यो रुघा मर्की लाग्ने, ज्वरो आउने मौसम नै हो । अहिले भर्खरै पनि मौसम परिवर्तन भएको कारण गर्मी मौसमबाट जाडो मोसममा जाने भएकाले चिसोको कारण मानिसमा रुघाखोकी लाग्ने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा यही रुघामर्की ब्लु भाइरस नै कोभिड–१९ भनिएको छ । वास्तवमा त्यो कोभिड वा कोरोना भाइरस होइन । ब्लु भाइरस शरीरबाट बाहिर जाने समयमा देखिएको भाइरस हो ।
कोभिडको यो प्रकोपले कस्तो रुप लिन्छ होला ?
केही समय पहिला काठमाडौं गएको थिएँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एक जना डाक्टर हुनुहुन्छ । मैले उहाँसँग कोभिडको अवस्था के छ रु भनेर बुझेको थिएँ । जवाफमा उहाँले ‘अहिले अलिक खतरा छ’ भन्नुभयो । त्यसदिन पश्चिममा एक जना डाक्टरको देहान्त भएको थियो । उहाँले त्यो प्रसंगमा डाक्टरको समेत मृत्यु हुन थालिसकेको अवस्था छ । तत्कालै कम्तिमा २० दिन जति पूर्ण रुपमा लकडाउने अनि मात्रै केही अपनायौं भने पक्कै पनि नियन्त्रण होला होइन भने भयावह हुने अवस्था छ भन्ने उहाँ सँग सल्लाह भएको छ ।
सोहीअनुसार हाम्रो रामधुनी नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, इलाका प्रहरी कार्यलय, जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा केही सुचना दिएको छु । अहिलेसम्म १३ देखि २४ वटा जिल्लामा अत्याधिक कोरोना संक्रमण छ । अबको विकल्प भनेको २० दिन पूर्णरुपमा लकडाउन नै हो । त्यसो भयो भने केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना छ ।
मेडिकल संस्थाबाहेक अन्य कुन कुन संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
म सामाजिक क्षेत्रको सबै संस्थाहरुमा आवद्ध रहेको छु । अहिले राष्ट्रिय रोग निवारण संस्था काठमाडौंको शाखाको रुपमा रामधुनीमा गठन गरिएको छ । त्यसको सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छु । झुम्का उद्योग वाणिज्य संघको वाणिज्य सचिवमा रहेको छु । झुम्का जेसिसको पूर्व अध्यक्ष, लाइन्स क्लब रामधुनीको पूर्व अध्यक्षलगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाको सल्लाहकार, धेरै सहकारीको बोर्ड मेम्बर, सल्लाहकार तथा सदस्य भएर काम गर्दै आएको छु ।
सामाजिक क्षेत्रमा के के समस्या छन् रु कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?
समस्या धेरै प्रकारका हुन्छन् । कुनै समस्या समाधान गर्ने खालका हुन्छन्, कुनै नगर्ने खालका हुन्छन् । यहाँ केही समय पहिलेसम्म लागूपदार्थ दुव्र्यवसनीको ठूलो समस्या थियो । म आफै लागेर प्रहरी कार्यलयको सहकार्यमा त्यसलाई न्युनिकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्योभन्दा बाहेकका समस्या भनेका नीतिगत समस्याहरु हुनसक्छन्, प्राकृतिक समस्याहरु हुन सक्छन् । त्यसले खासै प्रभाव पार्दैन ।
एक वर्ष भित्र ५१ वेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने र कलेज सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना छ । त्यो सँगै सुनसरी जिल्लाभरी सामाजिक अभियन्ताको रुपमा काम गर्ने मनसाय रहेको छ ।
अन्तीममा कसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
ग्राहकहरु, बिरामीहरुले कुनै समस्या पर्यो भने मलाई सम्पर्क गरेर भएका समस्याहरु जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु । मेडिकल व्यवसाय, नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी पनि हुनुपर्छ । मसँग मासिक औषधी सेवन गर्नुहुने २ सय जना हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग प्रत्येक महिनामा म डाइबिटिज क्याम्प गर्दैछु, कार्डेक मेडिसिनहरु बेला बेलामा सप्लाई गर्ने गरेको छु । उहाँहरुलाई थप उपचारको लागि डाक्टरहरु बोलाउने गरेको छु । त्यसको लागि उहाँहरुले पैसा तिर्नु पर्दैन । न्युनतम मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराएको छु, जोकोहीले जाँच्न पनि सक्नुहुन्छ । म र मेरो मेडिकल टिम स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि तत्पर छौं ।